GED | GTS Learning Center
နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များတွင် သွားရောက်ပညာသင်ကြားလိုသူ ကျောင်းသား/ သူများအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု GED အောင်လက်မှတ်ရရှိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
GED Test Center, GED စာစစ်ဌာနတွင် Computerized Exam စာမေးပွဲဖြေဆိုနိုင်ရန်အတွက် ပြဌာန်းထားသော သင်ခန်းစာများကို GTS Learning Center မှ တာဝန်ယူ ပို့ချပေးနေပါသည်။
ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီ၏ အရည်အချင်းအလိုက် လိုအပ်သော ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ချက်များဖြင့် သင်ကြားပေးနေပါသည်။
“ GTS makes them their dreams come true ”
Hein Khant Zaw ,Phone Pyae Kyaw Swar , and their family members in Assumption University campus for registration.
GED stands for General Educational Development. The GED test consists of four exams designed by the American Council on Education to measures "knowledge and skills atarange of complexity and difficulty levels that are covered across multiple high school grades," according to the GED Testing Service, which administers the test. The GED Test, or General Educational Development Test, is made up of four tests. These tests are designed to measure your proficiency in standard high-school subjects for anyone 16 or older not enrolled in high school. Rather than testing your memorization of specific facts, dates, or terms, the GED Test requires you to demonstrate applied knowledge and skills related to specific situations. By passing the GED Test, you will earnahigh-school equivalency diploma.
What is on GED?
The test consists of reasoning through language arts, mathematics, social studies and science. Students who pass the GED test receive an official American high school equivalency credential certifying that they have US-high-school-level academic skills. To pass the test,astudent must score at least 145 out of 200.
GED, General Education Development, ဆိုသည်မှာနိင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲဖြစ်ပါသည်။ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော ဘာသာရပ်လေးရပ်ကို ဖြေဆိုရပါသည်။
(1)	Mathematical Reasoning
(2)	Reasoning Through Language Arts
(4)	Social Studies
စာမေးပွဲဖြေဆိုသူသည် ဘာသာ ရပ် တခု စီ အ တွက် အမှတ် ၂၀၀ တွင် ၁၄၅ မှတ် ရ မှ သာ လျှင် အောင်မြင် မည် ဖြစ် ပါ သည်။ စာမေးပွဲဖြေဆိုအောင်မြင်လျှင် GED testing service မှ ချီး မြှင့်သော High School Equivalency Credential အောင်လက်မှတ်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
GED testing service, GED စာမေးပွဲဝန်ဆောင်မှုမူ, Policy အနေဖြင့် စာမေး ပွဲဖြေဆိုသူသည် ဖြေဆိုမည့် အချိန်တွင် အသက် ၁၆ နှစ် ပြည့်သူဖြစ်ရပါမည်။ GED သည် computer-based tests များ ဖြစ် ပြီး GED test center တွင်ဖြေဆိုရပါမည်။ ရန်ကုန်မြို MICT ဝင်း အတွင်း ရှိ GED test center တွင် GED test ဖြေ ဆိုနိုင် ပါ သည်။ GED test center မှ စာမေးပွဲ ဝင် ခွင့်အတွက်မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်း ခြင်း registration ဝန်ဆောင်မှုကိုဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
ယနေ့အချိန် တွင် နိင်ငံတကာ တက္ကသိုလ် များ အနေ ဖြင့် GED အာင်လက်မှတ် ကို ကျောင်းဝင် ခွင်. requirement လိုအပ်ချက် တခု အနေ ဖြင့် သတ်မှတ် လာ ပါ သည်။ အသေးစိတ်ထပ်မံ သိရှိလိုပါက GTS learning center သို.ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ GTS international learning center သည် ၂၀၁၇ မှ စပြီး GED စာမေးပွဲ ဖြေဆို မည့် ကျောင်း သူ ကျောင်း သား များ ကို တဦး ချင်း စီ ဧ။် လို အပ် ချက် နှင့် အညီ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုနိင် ရန် သင်ကြားပို့ချ ပေး ခဲ့ ပါ သည်။ ၂၀၂၀ ကိုဗစ် ကာလ မတိုင် မီ ကျောင်းသား ၃၃ ယောက် ကို အောင် မြင် စွာလေ့ ကျင့် သင်ကြား ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၂၀ ကိုဗစ် ကာလ မှ စ ပြီး Zoom application ကို အသုံး ပြု ပြီး Interactive Online course ဖြင့် GED ဘာသာရပ်များ ကို ဆက် လက် ပို့ ချ ပေး နေ ပါ သည်။
GTS’s online classes allows you to prepare individually for the GED exam. The program is divided into2online courses where you will be able to study all four test subject areas:
•	Reasoning through Language Arts and Social Studies
•	Science and Mathematical Reasoning
GTS is offeringaonline course options to students who are currently unable to study in classroom due to COVID-19
Prior to the start of classes, students will be sentawelcome email with information internet link of ZOOM conferencing application with meeting ID and password.
Web Browser: Firefox, Chrome, Internet Explorer 11
Earn Your GED Credential
Assumption University Myanmar Students Community Homage Paying Ceremony